ICourtyard Cottage 50m ukusuka ePatan Durbar Square! - I-Airbnb
ICourtyard Cottage 50m ukusuka ePatan Durbar Square!
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSailesh, Sohan, Nigen
Indlu entle encinci ezimeleyo, eyakhiwe kwintendelezo kumgama nje weemitha ezimbalwa ukusuka kwiGolden Temple kunye neDurbar Square - Indawo intle ukuntywiliselwa ngokwenkcubeko kwiPatan yakudala emangalisayo kwaye ujabulele intuthuzelo epheleleyo: kumgangatho ophantsi ligumbi lokuhlala eline super Isofa etofotofo, itafile ephantsi, iTV kunye neefestile ezinkulu zeglasi. Kwi-1st fl yendlu yakho ligumbi lokulala eline-AC & balcony + igumbi lokuhlambela- Ikhitshi kunye nomatshini wokuhlamba usentendelezweni. Ngabakho bonke !
Yindlu entle kakhulu enomgangatho omnye:
Kumgangatho ophantsi ligumbi lokuhlala elinesofa entle kakhulu, indawo yeti/kofu, itafile ephantsi, iTV kunye neefestile ezinkulu zeglasi.
-Kumgangatho wokuqala wendlu yakho ligumbi lokulala eline-AC & balcony kunye negumbi lokuhlambela langoku elineglasi eqinile kunye nama-24 Amanzi ashushu.
Ikhitshi libucala, libekwe kakuhle kwintendelezo. Wamkelekile ukuba ukonwabele isidlo sakho ngaphakathi kwindlu yakho okanye kwintendelezo.
Awunakukwazi ukufumana ubumelwane obuyinyani kunye nemveli; Nje ukuba ufumene iPatan endala, awusoze ufune ukuhlala eThamel kwakhona!
Xa uhlala kule nxalenye yedolophu ujikelezwe ziitempile zamaHindu, ii-stupas zamaBuddha, iimonki, iindawo zokutya zasekhaya kunye neentendelezo ezifihlakeleyo ezineendlela ezifihlakeleyo. Akukho nanye kuloo nto eye yanyamalala kwinyikima ;-) Ubomi basekuhlaleni obudlamkileyo baseNewars (iqela lokuqala leNtlambo yaseKathmandu) buqinisekisa amava enkcubeko atyebe kakhulu.
Izimvo eziyi-1 461
Sihlala sonwabile ukunceda iindwendwe zethu ngayo nantoni na ezinokuyifuna kwaye sincokole kamnandi nabo.
Iindwendwe zethu zinokusifumana yonke imihla kwiOfisi yethu yaseNepal eCozy ekumgangatho ophantsi weYatachhen House eSwotha Square (iimitha ezili-100 kude).
Iindwendwe zethu zinokusifumana yonke imihla kwiOfisi yethu yaseNepal…